မညှာမတာကြီး – Grab Love Story
မင်းအောင်က ကျူရှင်ဆရာ။ ကျူရှင်ဆရာဖြစ်သလို သိက္ခာကလည်းရှိတယ်။ မိန်းမ ကိစ္စအရှုပ်အရှင်းမရှိဘူး။ ရှိဖို့လည်း လူမထင်ပါဘူး။ ရုပ်ကလည်းဆိုးတာကိုး။ သူကလည်း မ်ိန်းမတွေနဲ့ဆို ခပ်တန်းတန်းပဲဆက်ဆံတယ်။ မဆက်ဆံရင်လည်း သူ့အသက် ၂၃လောက်နဲ့ ဘယ်သူကလေးစားမှာတုန်း။ သူ့မှာက အားနည်းချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ သူ့အမ နှင်းဖြူ။ နှင်းဖြူက မင်းအောင်ရဲ့ အမအရင်း အသက် ၁နှစ်ပဲကွာတယ်။
နှင်းဖြူနဲ့ မင်းအောင်က မောင်နှမ အရင်းဆိုပေမယ့် ရုပ်ချင်းက တခြားစီ။ မင်းအောင်က ၀က်ခြံ ပရဗွ။ အသားမည်းမည်း။ ကွမ်းတွေစား၊ ဆေးလိပ်တွေသောက်တော့ ရုပ်က ရင့်ထော်နေတာ။ နှင်းဖြူကတော့ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်း နှာတံပေါ်ပေါ် နှုတ်ခမ်းက ထူထူ။ ဗမာဆန်ဆန် ရင်ဖုံးထမီနဲ့ အမြဲနေတယ်။ နှင်းဖြူဒီလို နေတာလည်းအကြောင်းရှိတယ်။ ကျူရှင်မှာ ၁၀တန်းကျောင်းသားတွေက လစ်ရင်လစ်သလို ခိုးခိုးငမ်းတာ။ ဒါကိုသူလည်းသိတယ်။ သိတော့ ကုန်းလိုက်ကွလိုက်နဲ့ ချာတိတ်တွေကို မြူဆွယ်တာ။ သိက္ခာရှိရှိနဲ့ ဖင်နန့်တယ်လို့ပြောရင်ပိုမှန်မယ်။
နှင်းဖြူဖင်နန့်တာ သိသာအောင် ကျူ၇ှင်ပုံစံပြောဦးမယ်။ — ကျူရှင်က ရပ်ကွပ်အစွန်လေးမှာ၇ှိတယ်။ခြံက အကျယ်ကြီး။ အရှေ့ဖက်မှာက ခြင်းဝိုင်း၊ ဘောလုံး၊တစ်ခုခု ညနေဖက် ကစားကြတယ်။ ခြံခြေရင်းမှာက တဲထိုးထားပြီး ကလေးတွေစာသင်တယ်။ ခြံနောက်ဖေးဖက်မှာမှ မင်းအောင်တို့မောင်နှမ ၂ယောက်နေတယ်။ နဂိုက အမယ်အိုကြီးရှိတယ်။ သေသွားတဲ့နောက်ပိုင်းတော့ မောင်နှမ၂ယောက် အိမ်ကို ၂ခြမ်းခြမ်းပြီးနေတာ။ နှင်းဖြူက မီးဖိုချောင်ဘေးနားက အခန်း၊မင်းအောင်က အိမ်ရှေ့အခန်း။ မီးဖိုချောင်နဲ့ ရေကပြင်က တံခါးပေါက်တစ်ချပ်ပဲခြားတယ်။ အဲ့ရေကပြင်တည့်တည့်မှာက အ်ိမ်သာ။ ပြောရရင် အိမ်သာထဲကနေကြည့်ရင် မီးဖိုခန်းနဲ့ နှင်းဖြူ အခန်းတံခါးပေါက်ကိုတည့်တည့်ပဲ။ ချာတိတ်တွေက နဂိုကတော့ မသိမသာချောင်းတာပေါ့။နောက်တော့ သိသိသာသာတွေချောင်းတော့တာပဲ။ မင်းအောင်က စာကျက်ခိုင်းပြီးတော့ အပြင်ခနထွက်သွားတဲ့အချိန်ဆို လူပျိုပေါက်တွေက နောက်ဖေးလစ်တော့တာပဲ။ – မလစ်ပဲနေမလား။ နှင်းဖြူက အဲ့အချိန်ဆို မီးဖိုခန်းထဲမှာ ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်နဲ့ ဘာတွေရှုပ်နေမှန်းကိုမသိတာ။ အောင်ဘပြောတာပြန်ပြောရဦးမယ်။
ကျောင်းသားအောင်ဘ။ ဆယ်တန်းကို ၂ခါကျ၊ ၈တန်း၁ခါကျ။ နှင်းဖြူကို စချောင်းတာလည်းဒီကောင်ပဲ။ အဲ့နေ့က.. ” မနှင်းဖြူက ငြုပ်သီးထောင်းနေတာကွ၊ ဆောင့်ကြောင့်ကြီးထိုင်ပြီး ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်နဲ့ထောင်းနေတာ။ ငါလည်း သေးပေါက်ချင်လို့ပြေးတာကွာ။ သူငြုပ်သီးထောင်းသံကြားတော့ ကြည့်လိုက်မှ .. အကိတ်ကွာ။ အနောက်နေ သေချာ မြင်ရတာ။ အိမ်သာဖက်ဖင်လှည့်ပြီး ထောင်းနေတာ။ ဒုတ် ဒုတ် ဆို ဖင်က လှုပ်လှုပ်သွားတာ။ ငါလည်းသေးပေါက်ပြီးတာတောင် အိမ်သာထဲက မထွက်ပဲချောင်းနေတာ။ ဖင်က လှုပ်နေတာကြည့်ရင်း တဒုတ်ဒုတ် အသံနားထောင်ရင်းနဲ့ ဂွင်းထုလိုက်တာ ၁ချီတောင်ပြီးသွားတယ်။ နောက်လည်း လစ်ရင် ငါချောင်းတော့တာာပဲဟေ့ကောင်ရေ”တဲ့။ အောင်ဘ တင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ နောက်တစ်ယောက်ကြုံသေးတယ်။ ငနီ..။ ခွေးနီလို့တောင်ခေါ်ကြတယ်။ ခွေးနီအဲ့နေ့ကလည်း အောင်ဘပြောလို့ချောင်းမယ်ဆိုပြီး လစ်တာ။ ထုံးစံအတိုင်း နှင်းဖြူက လေးဖက်ကြီးထောက်ပြီး မီးဖိုအောက် ဘာကုန်းရှာနေလည်းမသိဘူး။ မသိရင်လေးဖက်ကုန်းထားသလိုပဲ။ ခွေးနီလည်း ဆရာ့အမဖင်ကြီးက ကိုယ့်ရှေ့နားလေးမှာ လေးဖက်ကုန်းထားတာမြင်တော့ တ အ အနဲ့ဂွင်းထုလိုက်တာပဲတဲ့။ အမှန်ဆို ဒီကောင်က တမင် အသံထွက်အောင်လုပ်ပြီးဂွင်းထုတာ။ နှင်းဖြူကြားတာပေါ့။
မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားတာ။ ဒီလိုနဲ့ နှင်းဖြူ မြူစွယ်တာ များများလာတော့ စားနေကျကြောင်ဖားနဲ့သွားကြုံပါလေရောဗျာ။ — အဲ့ကောင်က နှစ်ဝက်မှပြောင်းလာတဲ့ကောင်။ အသက်က ၂၀လောက်ရှိနေပြီ။ လင်းလင်းတဲ့ ။၁၀တန်းကိုဖြေတာ ၃ခါ။ ဖြေလိုက်မဖြေလိုက်နဲ့ကောင်။ ငရှုပ်။အိမ်ကလည်းမနိုင်လို့လွှတ်ထားတဲ့ ကောင်။ ဒီကောင်က ဒီကျူရှင်ပြောင်းလာလာချင်း ဆရာ့အမ သတင်းလည်းကြားရော။ ချက်ချင်းဂွင်ဖန်တော့တာ။ မိန်းမ အတွေ့အကြုံလည်းရှိတော့ နှင်းဖြူ ငတ်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်။ ပထမ တစ်ရက်တော့ အများနည်းတူ ဂွင်းထုတာပဲ။ နောက်တစ်ရက်ကျတော့ တစ်မျိုးတိုးပါလေတယ်။ နှင်းဖြူက ထုံးစံအတိုင်း ဖင်ကြီးကုန်းပြီး မီးဖိုအောက် ငုံ့ပြီး ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်လှုပ်နေတာ။ ဒီချိန် ကျွီခနဲ အိမ်သာတံခါးဖွင့်သံကြားလိုက်တယ်။ လှည့်ကြည့်ချင်ပေမယ့် ရှက်တာလည်း ခုမှရှက်တော့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ခြေသံက တရှပ်ရှပ်နဲ့ အနားကပ်လာတယ်။ ရှက်လွန်းလို့ မျက်နာကြီးတောင် ထူအမ်းနေပြီ။ ငါဘာတွေများလုပ်မိပါလည်းးပေါ့။ ပြီးတော့ ခြေသံနဲ့အတူ တဖတ်ဖတ်နဲ့ ဂွင်းထုနေတဲ့အသံလည်းကြားရတယ်။
ဖင်တုံးကြီးနဲ့ လင်းလင်းရဲ့လီးနဲ့က သိပ်တောင်မကွာဘူး တစ်တောင်လောက်ပဲကွာတော့တယ်။ လင်းလင်းက နှင်းဖြူဖင်နောက်မှာ ခပ်တည်တည်ရပ်ပြီးဂွင်းထုနေတာ။ ပါးစပ်ကလည်း..ဖင်ကြီးကွာလိုးလိုက်ရရင်ရှယ်ပဲဆိုပြီး ကြိမ်းဝါးနေတာ။ ကိုယ့်ဖင်ကို အနောက်ကနေ ဇိမ်နဲ့ကြည့်ရင်း ဂွင်းထုနေတာလည်းသိ၊ ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်လည်း အပြောခံနေရတာတောင် ရှက်စိတ်နဲ့ ဏှာစိတ်က တန်းတူဖြစ်နေတာ။ နှင်းဖြူရှက်နေတုန်းရှိသေး ပျစ်ခနဲ ပျစ်ခနဲ လရည်ပူပူတွေက ထမိန်ပေါ်ကျလာပါလေေ၇ာ။ အဲ့တော့မှ လင်းလင်းက နှင်းဖြူခါး၂လုံးကို ကိုင်ပြီး လီးနဲ့ ထမိန်ပေါ်မှာ ဖိပြီး သုတ်ချလိုက်တာ။ မပြောင်မချင်းသုတ်တာ။ ပြီးလည်းပြီးရော ပြန်ထွက်သွားကော။ — လင်းလင်းက ဒီလောက်လုပ်တာတောင် ဘာမှမဖြစ်တာသိတော့ နောက်နေ့ တကယ်စားရဖုိ့ကြံတယ်။ဒါပေမယ့် မင်းအောင်က ဒီနေ့ ဘယ်မှမသွားတော့ စိတ်တွေကိုညစ်လို့။ အဲ့ချိန်.. “ဟေ့ကောင် ငလင်း..” မင်းအောင်ကလှမ်းခေါ်လိုက်သည်။
“မင်းကွာ..ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလည်းဒီ၁၀တန်းကို ၁သက်လုံးဖြေမှာလားဟေ။ စောက်သုံးကိုမကျဘူး။ မင်းကွာ..ဒီညနေ အိမ်ပြန်ရင် စာအုပ်တွေယူမသွားနဲ့။ ဒီမှာပဲ အိမ်စာတွေလာပြန်လုပ်။မင်းအိမ်ကိုငါမနေ့ကသွားပြောပြိးပြီ။” ဟုတ်တာလည်းဟုတ်သည်။ လင်းလင်းက ကျန်တာတွေသာ လက်စောင်းထက်တာ။ စာကျတော့ တစ်လုံးမှမရ။ သချာ်ဆို ညီမျှခြင်း၂ဖက် ဟိုဖက်ဒီဖက်တောင် မပြောင်းတတ်။ “မင်းဒီည မြန်မာ ကဗျာထဲက ခက်ဆစ်တွေအကုန်ကျက်ရမယ်။ မရရင်ပြန်မလွှတ်ဘူး။ ဒါပဲ” မင်းအောင်က တစ်ချက်လွှတ်ပြောကာထသွားသည်။ ပျော်သွားသည်မှာ လင်းလင်း။ မပျော်ခံနိုင်ရိုးလား။ တစ်ညလုံး ဆရာ့အမကိုဘယ်လိုကြံကြံရပြီလေ။ “ငလင်း မင်းဘာတွေရပြီလည်း။
“…” “နာရီကြည့်ဦး ၁၀နာရီထုိးနေပြီ မင်းစကျက်တာ ၆နာရီထဲကအေး ဒီည တစ်လုံးတောင်မရရင် မအိပ်နဲ့။ မနက် ကဗျာတစ်ပုဒ်တောင်မရရင်သေမယ်” “..ဟုတ်..အကို” “ငါ အိပ်တော့မယ်။ မင်းအိမ်မပြန်နဲ့ ဒီမှာပဲအိပ်တော့.ငါ့ကုတင်ဘေးမှာ ခြင်ထောင်တစ်လုံးထပ်ထောင်ထားတယ်။စာရမှဝင်အိပ်ကြားလား၊ မင်း မိဘက သူများထက် ၃ဆပိုပေးထားတာကွ။ကြိုးစားပါ.. ငါဆိုရင်—– ” ကျူရှင်ဆ၇ာတို့ထုံးစံအတိုင်း တောင်စဉ်ရေမရေ၇ာက်တတ်ရာရာတွေလျောက်ပြောရင်း “ကဲ..ငါအိပ်ပြီ..ဒါပဲ..မီးပိတ် ခြံတံခါးစစ်” ၁၂လောက်ဆို အိပ်တော့ ကြားလား” “ဟုတ်..အကို” .. ၁၁နာရီထိုး.. ပုရစ်အော်သံတွေပဲရှိသည်။ သာမန်လူဆိုရင်တော့ ဒီချိန်ခြံကျယ်ကြီးထဲ ကြောက်လို့တုန်နေမည်။ ငလင်းကတော့ အကြံနဲ့ဆိုတော့ လီးကိုဆုပ်လိုက် မင်းအောင်အခြေနေကြည့်လိုက်နဲ့။ ၁၁ခွဲကျတော့ မင်းအောင် အိပ်ပျော်သွားသည်။
ထိုတော့မှ ဇာတ်လမ်းစသည်။ နှင်းဖြူအိပ်ခန်းတခါးကို သွားခေါက်သည်။ “ဒေါက်ဒေါက်..ဒေါက်” “ဘယ်…သူ..လဲ” “မနှင်းဖြူ ကျနော်ငလင်းပါ..ဆရာကသော့ပေးထားတယ်ဆိုလို့” “ခနလေး..” “”ကျွီ””…. တံခါးဖွင့်သံမှာမကျယ်လှသော်လည်း တိတ်နေသောကြောင့် မင်းအောင် နိုးမည်ကိုပင် စိုးရိမ်ရသည်။ “ရော့..ဒီမှာခြံသော့” “ဟုတ်..မနှင်းဖြူတံခါးလိုက်ပိတ်ဦးလေ..” “အင်း..အင်း..” ခြံရှေ့နားကဘောလုံးကွင်းနားအထိ တိတ်တိတ် လေး လျောက်လာကြရင်း ငလင်းမှ တုန့်ခနဲရပ်ကာ “နှင်းဖြူ ဖင်ကကြီးတယ်နော်” “အို..” ဒီကောင်မှန်းအခုမှ နှင်းဖြူသိမိသည်။ မထူးးတော့… .. “နှင်းဖြူ ကျနော့် လီးကိုမှတ်မိလား။” အမှောင်ထဲမှာဆိုပေမယ့် တဲဖက်က အလင်း မိန်ပြပြကြောင့် မသဲမကွဲတော့မြင်ရသည်။ စကားတစ်တစ်ခွခွတွေကတော့ အတိုင်းသား.. “ဒီမှာ ကိုင်ကြည့်..” ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပင် လက်ကိုဆွဲကာ လီးပေါ်တင်ပေးလိုက်သည်။
.. “အို..ကြီးလိုက်တာ။” ဟုတ်သည်.. ငလင်း၏လီးမှာ လူကြီးတစ်ယောက်လီးလောက်ရှိသည်။ ဆေးထိုးထားသလို ဂေါ်လီ၃လုံးထည့်ထားသည်။ ပုဆိုးအပေါ်မှစမ်းသဖြင့်ဂေါ်လီတော့ မစမ်းမိသေး။ “နှင်းဖြူ ဖင်အလိုးခံချင်နေတာမလား”. ..”…” “..နှင်းဖြူကို ကျုပ် အခုဘောလုံးကွင်းထဲမှာလိုးမယ်”ဟုဆိုကာ တွန်းလှဲလိုက်သည်။ ငလင်း၏ အပြောတွေနဲ့တင် အဖုတ်က အ၇ည်ရွဲနေပြီ။ ဒါတင်မက ငလင်း၏လက်ကလည်း နှင်းဖြူတင်ပါး၂လုံးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုပ်ကိုင်သည်။ ကျန်လက်ကလည်း ၇င်ဖုံးအောက်နေပင့်ပြီး နို့တွေကိုချေသည်။ အောက်ကနှင်းဖြူမှာထွန့်ထွန့်ကိုလူးလျက်။ မြေတလင်းမှာ တိ၇စ္ဆာန်များလိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြတော့သည်။ နှင်းဖြူ ခြေနှစ်ချောင်းအားဆွဲဖြဲကာ မညှာမတာ လီးကိုဆောင့်ထည့်ချလိုက်သည်။
“ဗြစ်…ဗြိ…” အား…အား.. အားး ၀ု ၀ူး အော်သံက စူးခနဲထွက်သွားသဖြင့် ပါးစပ်အား အတင်းအုပ်လိုက်သည်။ “နင့်လင်နိုးသွားမယ် ကောင်မရဲ့ စောက်သံမထွက်နဲ့ဟ” ဟုဆိုကာ ညာလက်ဖြင့်နို့တစ်လုံ့းကိုပင့်ကိုင် ဘယ်လက်ဖြင့် ပါးစပ်ကို အုပ်ကာ အားနဲ့စောင့်ပါတော့သည်။ နှင်းဖြူမှာ အပျိုမဟုတ်တော့သော်လည်း လီးမ၀င်တာကြာသည့်စောက်ဖုတ်မှာ စီးပိုင်နေသည်။ တင်ပါးတွေကြားထဲမှာ သဲတွေနဲ့လူးနေသည်။ စောက်ရေတွေနှင့် ဖုန်တွေရောကာ ခြောက်ကပ်ကပ် ကြမ်းရှရှ..။ ဒါတင်မက ငလင်းက အားနဲ့မညှာမတာ စောင့်လိုးသဖြင့် ကောင်းတာထက်နာတာပဲခံစားရသည်။
“အု..အု..၀ု..၀ူး” အော်သံတွေက အုပ်အုပ်လေးဆိုပင်မယ့် ပုရစ်သံကိုတော့ ဖုံးသွားသည်။ ငလင်းလည်း ဘာမှ ဂရုမစိုက်တော့ ပုခုံးကို ကိုင်ကာ လီးကျွတ်တဲ့အထိဆောင့်ဆောင့်ချပါတော့သည်။ ..”အား..အမေ့..လုပ်ကြပါဦး..အ အ..အ.. အကိုရေ…မောင်လေးရေ..” နှင်းဖြူမည်သို့ပင် အကူညီတောင်းတောင်း.. ငလင်းကတော့ လိုးချင်တိုင်းလိုးနေတော့သည်။ ဒီလိုနှင့်..အချက်ရေထောင်ချီလို့ နှင်းဖြူ..ဘယ်နှစ်ချီပြီးမှန်းမသိ..ငလင်းကတော့ ဆောင့်ကောင်းနေတုန်း ၂ယောက်လုံးကို ကြည့်ရင်း အိမ်ထဲမှနေ ဂွင်းတိုက်နေသူမှာ မင်းအောင်ဖြစ်သည့် အကြောင်းကိုတော့ အထူးပြောစရာမလိုတော့ပေ.. ။ — ပြီး